Wafti ka socda IGAD oo la filaayo in ay maantay soo gaaraan magaalada Kismaayo. – Radio Daljir
Abriil 20, 2013 2:04 b 0
Kismaayo, April, 20, 2013 ? Waxaa maantay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose la filayaa inay soo gaaraan wafuud ballaan oo ka socota urur gobolleedka IGAD.
Wararka aynu ka helayno Kismaayo ayaa intaasi ku daraya in ujeedada socdaalkoodu uu ku salaysan-yahay sidii ay u sixi lahaayeen ciladaha farsamo oo hareeyay shirka Kismaayo, waxaana magaalada Kismaayo ka socda maantay u diyaar-garaw ballaaran oo lagu soo dhawaynayo madaxda ka socota IGAD.
Waxgarad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa Radio Daljir u xaqiijiyay in IGAD ay mawqif cad oo taageero ah ka taagan-tahay arrimaha maamul u samaynta gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, balse dad badan ayaa aaminsan in illaa xilligaan uusan caddayn ra?yiga IGAD ee ku aadan shirka Kismaayo.
Socdaalka la filayo inay maantay Kismaayo kusoo gaaraan wafdigaan ka socda IGAD ayaa kusoo beegmaya xilli dawladda Soomaaliya ay aad ugu mashquulsanayd muddooyinkii ugu dambeeyay sidii ay taageero uga heli-lahayd IGAD, taasi oo ku aadan in IGAD ay tixgalin gaar ah siiyo, taageerana u muujiso ?mawqifka dawladda ee arrimaha Jubbooyinka.